Xulka Kubadda Cagta ee Puntland oo u soo gudbay kama dambeysta tartanka – Radio Muqdisho
Xulka kubada Cagta ee Puntland ayaa iska xaadirisay kama dambeyska koobka Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Benaadir ee ka socda garoonka Koonis Stadium kaddib markii ay 1-0 ku suuldaareen kooxda martida loo ahaa ee Banaadir.
iyagoo uga mahadcelinaya gool qurxoon uu u dhaliyay Yacquub Cismaan Maxamed.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan, waxaana labada dhinac ay soo bandhigeen cayaar wanaag aad loo jecleystay oo ay ku farxeen dhamaan taageerayaashii u soo daawasho tegay cayaarta, inkasta oo xidigaha Puntland ay heleen fursado badan.
Qeybtii labaad ee cayaarta waxa ay ku bilaabatay mid dar dar xoogan leh, waxaana labada xul ay sameeyeen fursado badan, balse daqiiqaddii 77aad ee cayaarta ayaa xidiga Yacquub Cismaan Maxamed uu xulkiisa u dhaliyay gool qurux badan, taasi oo keentay in Xulka kubadda cagta ee Puntland ay hogaanka cayaarta la wareegaan.
Xidigaha Gobolka Benaadir ayaa isku dayay inay abuuraan fursado ay ku bareejeeyaan Xulka Puntland balse ma aysan u suurta gelin, waxaana cayaarta waqtigii loogu talagalay ay ku soo idlaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday Xulka Puntland, sidaas ayay ku tiigsadeen finalka tartanka, waana markii labaad ee Xulka Gobolka Benaadir lagu reebo wareegga afar dhamaadka ee tartanka oo ay ka badiyaan Xidigaha Puntland.
Puntland oo difaacaneysa koobkaan ayaa waxa ay finalka ku sugeysaa midkii soo baxa kooxaha Koonfur Galbeed iyo Juballand oo berri ku ciyaaraya garoonka Koonis Degmada C/casiis ee Gobolka Benaadir.
Sannadkii hore Puntland waxa ay koobka ka qaadeen finalka xulka Jubbaland, kuwaasoo haatan semi-finalka jooga.